Dugsiga Dhexe - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Meel ammaan ah oo ardayda ay sahamiyaan fursadaha
Dugsiga Dhexe wuxuu matalayaa waqti u gaar ah nolosheena ardaydeena markay korayaan oo ay horumarinayaan dhamaan aagaga. Marka lagu daro dhammaan isbeddelada jireed, shucuureed iyo bulsheed ee ay ardaydu marayaan, waxaan sidoo kale ognahay inay si aad ah ugu baraarugsan yihiin una nugul yihiin ku habboonaanta iyo helitaanka dariiqa saxda ah.
Waxaan helnaa ardayda dugsiga dhexe dhigata. Waan fahamsanahay baahidooda gaarka ah. Shaqaalaheennu waa khabiiro in ka badan kaliya waxyaabaha ay barayaan. Waxaa naga go'an inaan bixinno khibrado waxbarasho oo horumar ahaan waxqabad leh, caqabado leh, awoodsiinaya, sinnaan iyo waxyaabo badan oo xiiso leh! Ardaydu waxay ku sahamiyaan waxyaalo badan oo ay xiiseeyaan si gacmeed iyo siyaabo soo jiidasho leh. Mar alla markii ay suurta gasho, maadooyinka maadada (sida sayniska iyo farshaxanka ama cilmiga bulshada iyo xisaabta) waa la dhexgaliyay si loo bixiyo waaya-aragnimo dhab ah oo dunida ka jirta gudaha iyo dibedda fasalka.
Ardaydeena waxay xiriir la dhisaan macalimiintooda iyo asxaabtooda inta ay helayaan xirfado sida is-u-doodid, abaabul, maaraynta waqtiga, isgaarsiinta, iyo istiraatiijiyado wax ku ool ah oo daraasad.
“Macallimiintu waxay muujiyeen rabitaan dhab ah oo ah inay maal-gashadaan arday kasta oo ay siiyaan wixii shakhsi ahaaneed ee dheeraad ah ee loo baahan yahay. Dhisida xiriirka ardayda iyo shaqaalaha waa hubaal inay damaanad qaadi doonto guusha dhinacyada oo dhan!
Sahami Koorsooyinka & Isdiiwaangeli Dugsiga Dhexe
Baadh waxqabadyada dugsiga dhexe ee Oak-land
Baadh hawlaha dugsiga dhexe ee weli socda
Ma isweydiisay waxa ilmahaagu ka baranayo dugsiga hadda? Ama waxaa laga yaabaa inaadan xasuusan karin goorta ay u maleynayaan in iskuulkaas la dhameystiray! Khariidadeena Qoyska waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad hesho jawaabaha dhammaan su'aalahaaga la xiriira dugsiga.
Khariidadda 6-aad Roadmap
Khariidadda Wadada Fasalka 7aad
Khariidadda Fasalka 8aad
Koorsooyinka: Ingiriisiga 6
Fiiri sharaxaadda koorsada ee Ingiriisiga fasalka lixaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Koorsooyinka: Ingiriisiga 6
Koorsooyinka: Xisaabta 6
Fiiri sharaxaadda koorsada ee xisaabta fasalka lixaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Xisaabta 6
Koorsooyinka: Muusigga Xulkiisa 6
Fiiri ikhtiyaaraadka xulashada muusikada ee ardayda fasalka 6.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Muusikada la doorto 6
Koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 6
Fiiri sharaxaadda koorsada ee ku saabsan waxbarashada jimicsiga ee fasalka lixaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 6
Koorsooyinka: Sayniska Jirka 6
Fiiri sharaxaadda koorsada sayniska fasalka lixaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Sayniska Jirka 6
Koorsooyinka: Cilmiga Bulshada 6 - Taariikhda Minnesota
Fiiri sharaxaadda koorsada ee darajada lixaad ee cilmiga bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Cilmiga bulshada 6 - Taariikhda Minnesota
Koorsooyinka: Wheel 6
Fiiri koorsooyinka sahaminta ee ardaydu qaadan doonaan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Wheel 6
Koorsooyinka: Ingiriis 7
Fiiri sharraxaadda koorsooyinka Ingiriisiga ee la bixiyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Ingiriis 7
Koorsooyinka: Sayniska Nolosha 7
Fiiri sharraxaadda koorsooyinka sayniska ee la bixiyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Sayniska Nolosha 7
Koorsooyinka: Xisaabta 7
Fiiri sharaxaadda koorsada ee koorsooyinka xisaabta ee la bixiyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Xisaabta 7
Koorsooyinka: Muusikada la xushay 7
Fiiri ikhtiyaaraadka xulashada muusikada ee ardayda fasalka 7.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Muusiga la xushay 7
Koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 7
Fiiri sharaxaadda koorsada ee ku saabsan waxbarashada jimicsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 7
Koorsooyinka: Cilmiga Bulshada 7 - Daraasadaha Mareykanka
Fiiri sharaxaadda koorsada ee barashada bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Cilmiga bulshada 7 - Daraasadaha Mareykanka
Koorsooyinka: Wheel 7
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Wheel 7
Koorsooyinka: Xulashada 8
Fiiri dhammaan koorsooyinka doorashada ee la heli karo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Xulashada 8
Koorsooyinka: Ingiriis 8
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Ingiriis 8
Koorsooyinka: Xisaab 8
Fiiri sharraxaadda koorsooyinka xisaabta ee la bixiyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Xisaabta 8
Koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 8
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Waxbarashada Jirka 8
Koorsooyinka: Sayniska 8 - Sayniska Dunida
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Sayniska 8 - Cilmiga dhulka
Koorsooyinka: Cilmiga Bulshada 8
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka: Cilmiga bulshada 8
Ardayda dugsiga dhexe wey is bartaan waxayna horumariyaan cilaaqaad macno leh shaqaalaha iyada oo loo marayo waxyaabaha sida
Halkee qofkasta uu iska leeyahay (WEB) lataliyaha iyo kahortaga xoog u sheegashada ardayda fasalka 6aad
Fasallo latalin ah
Kooxaha heerka fasalka
Macallimiinta dugsiga dhexe waxay bartaan arday kasta waxayna ka shaqeeyaan sidii ay uga qayb galin lahaayeen barashada iyagoo fahmaya xooggooda shaqsiyadeed iyo waxa ay jecel yihiin.
Ardaydu waxay sidoo kale ka dooran karaan koorsooyin kala duwan oo kiciya xiisaha ay qabaan.
Hadday ku dhex jirto fasalka ama wixii ka dambeeya, waxaan rabnaa inaan ka dhigno dugsiga dhexe mid khuseeya ardaydeena.
In kabadan 60% ardaydeena ayaa kaqeybqaata howlo ka baxsan maalinta iskuulka - laga bilaabo muusikada iyo riwaayadaha ilaa naadiga xisaabta iyo aaladaha robotka
“Waan ku faraxsanahay waxa ku jira, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in carruurteyda loo oggol yahay inay ku horumariyaan si ka dhakhso badan kuwa kale ee ay isku fasalka yihiin. Tani waxay ka dhigeysaa inay dhiirigeliyaan oo ay ku hawlan yihiin. "